LinuxConsole: fizarana miompana amin'ny lalao video | Avy amin'ny Linux
LinuxConsole: fizarana miompana amin'ny videogames
LinuxConsole dia fizarana Linux ho avy feno rindrambaiko sy lalao maro karazana loharano misokatra, miaraka amin'ny fifantohana amin'ireo ankizy sy solosaina taloha. LinuxConsole koa dia manome fanohanana ireo karatra sary vaovao sy taloha.
Anisan'ireo mampiavaka azy lehibe ahafahantsika manasongadina ny fametrahana mora ity fizarana ity, manana rindrambaiko maro karazana amin'ny endrika modules sy ny famaritana fitaovana tsara izy.
LinuxConsole azo apetraka mora amin'ny solosaina 32-bit na 64-bit, mahatonga azy io ho safidy tsara hafa amin'ireo fizarana izay nandao ny fanohanana ny maritrano 32-bit, miampy ny fametrahana rindrambaiko sy lalao vonona hampiasaina.
Izy io dia nivoatra tsy miankina miaraka amin'ny fanontana samihafa natao ho an'ny solosaim-birao, mpizara, konsole lalao, ary solosaina taloha.
1 Inona no vaovao amin'ny LinuxConsole 2018
1.1 Rindrambaiko tafiditra ao amin'ny LinuxConsole 2.5
2 Sintomy ny LinuxConsole 2.5
Inona no vaovao amin'ny LinuxConsole 2018
Ny fizarana dia nohavaozina vao haingana nahatratra ny kinova LinuxConsole 2.5 izay mitondra fanovana vaovao ary ambonin'izany rehetra izany dia misy fanavaozana vaovao ho an'ireo fitaovana efa tafiditra ao amin'ireo kinova taloha.
LinuxConsole 2.5 mitondra singa nohavaozina, toy ny kernel Linux 4.9.66 LTS ho an'ny kinova 64-bit sy ny kernel Linux 4.1.48 LTS ho an'ny kinova 32-bit.
Ny mpamorona ity fizarana ity dia nizara hevitra kely momba ity famoahana vaovao ny fizarana azy ireo ity.
Yann Le Doaré naneho hevitra:
«Amin'ny linuxconsole 2018, azonao atao ny mametraka mora foana ny fizarana linux maoderina miaraka amina rindrambaiko maro izay tsy tafiditra anaty boaty. Linuxconsole dia fizarana iray izay efa nisy nandritra ny 15 taona. ny famoahana 32-bit dia afaka manao rindrambaiko vao haingana toy ny firefox 57 amin'ny solosaina taloha "
Ity fizarana ity dia mijanona ho mafy orina amin'ny fanolorana fametrahana mora ho an'ny mpampiasa na amin'ny rafitra tokana amin'ny solosaina na koa miaraka amin'ireo rafitra miasa hafa.
Ao amin'ity kinova vaovao LinuxConsole 2.5 ity mitondra amin'ny tontolon'ny birao MATE 1.18 toy ny birao mahazatra, mamela ny fitantanana ny fitaovana Bluetooth ary manamora ny fananganana tamba-jotra tsy misy tariby.
Izy io koa dia miaraka amin'ny tranokala Mozilla Firefox 57 Quantum ho mpizaha toerana mahazatra ao amin'ny rafitra.
Rindrambaiko tafiditra ao amin'ny LinuxConsole 2.5
Araka ny voalaza, LinuxConsole dia fizarana miompana amin'ny videogames, noho izany azontsika atao ny manasongadina fa amin'ity kinova vaovao ity dia tafiditra ao ny lalao Linux ao amin'ny LinuxConsole ireto lohateny malaza manaraka ireto:
Ny mpanjifa Steam
Mikasika ny fampiharana dia afaka mahita ny Mpijery tranonkala QupZilla, mpanjifa Filezilla FTP, mpanjifa BitTorrent Transmission, fitaovana famokarana mozika Hydrogen LMMS, VLC Media Player, tonian-dahatsoratra Audacity, Audaz audio Audaz, zynaddsubfx, Qjackctl, fluidsynth, tonian-dahatsoratra Tranon-tsary, ny Office LibreOffice Suite, ny programa fanontana amin'ny birao Scribus, ary ny mpamoaka lahatsoratra an'i AbiWord.
Ny fampiasana ny repositories rindrambaiko dia afaka mametraka Google Chrome sy mpizaha tranonkala hafa koa ny mpampiasa, ary koa ny mpanjifa Microsoft Skype VoIP, lalao XMOTO, rindrambaiko virtualization Oracle VirtualBox, ary tonian-dahatsary sary Tux Paint raster.
Raha ny amin'ny misongadina ny fahasamihafana misy eo amin'ny kinova 64-bit sy 32-bit:
Ao amin'ny kinova 32-bit ananantsika:
kernel 4.1.31 (LTS)
Mihazakazaka amin'ny CPU taloha (tsy misy PAE)
Raha ao amin'ny kinova 64-bit ananantsika:
kernel 4.4.19 (LTS)
Desktop Mate 1.2
Sintomy ny LinuxConsole 2.5
Raha te hampidina ity fizarana Linux ity ianao azonao atao izany avy amin'ireto rohy manaraka ireto Amin'izay ianao dia hahazo ny sarin'ny rafitra, hahafahanao mirakitra izany amin'ny pendrive na DVD arakaraka ny firafitr'ilay mpanodina tianao.
Sintomy LinuxConsole 2.5 32-bit
Sintomy LinuxConsole 2.5 64-bit
Azontsika atao ny manantitrantitra fa LinuxConsole 2.5 Izy roa dia azo apetraka ho rafitra fiasa lehibe amin'ny solosainao, ary koa hapetraka miaraka amin'ny rafitra hafa tsy misy olana. Ankoatr'izay dia azo sedraina amin'ny kinova mivantana izy io nefa tsy manimba ny rafitrao na ny rakitra manan-danja.
Raha fantatrao ny fizarana hafa mifantoka amin'ny lalao Linux dia aza misalasala mizara izany aminay amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » LinuxConsole: fizarana miompana amin'ny videogames
Sairac dia hoy izy:
Salama, hiasa amin'ny satelita Toshiba taloha be ve ity distro ity miaraka amin'ny horonan-tsary 16MB sy RAM 256MB fotsiny. Raha tsy izany, distro iza no hatolonao ho solosaina finday taloha? Misaotra, tena mahaliana ity lahatsoratra ity.
Valio amin'i Sairac
Noel gutierrez dia hoy izy:
Ny marina dia manana RAM kely dia kely ny solosainao, fa zahao ity distro ity:
Valiny tamin'i Noel Gutiérrez
Azonao atao koa ny manandrana ny Lubuntu
Ing. Jose Albert dia hoy izy:
Ilay anomanako am-panetren-tena dia manana hery lehibe kokoa. MinerOS 1.1 (Onix) Edition Multimedia Studio sy efitrano filalaovana.
Valiny tamin'i Ing. Jose Albert
Min: Mpizaha tranonkala open source minimalista
Diffimg: fampiharana fampitahana sary